Rabshadaha Daaweynta ee Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Rabshadaha Daaweynta ee Dutchtown
Posted on Waxaa laga yaabaa 27th, 2021
2019, Magaalada St. Louis waxay u dooratay Dutchtown inay ka mid noqoto xaafadaha magaalada si ay uga qayb galaan Rabshadaha Curyaannimada, Hindisaha ladagaalanka rabshadaha ee kahortaga rabshadaha oo lagu guuleystey magaalooyin iyo xaafado badan oo dalka ah. Qaadashada dariiq cusub oo la xiriirta arrimaha dambiga iyo nabadgelyada ayaa leh dad badan oo deggan Dutchtown oo rajo ka leh mustaqbalka deriskeenna iyo deriskeenna.
Rajadaasina way guuleysaneysaa. Bishii Meey 26keedii, Waaxda Caafimaadka ee magaaladu waxay soo saartay tirakoob muujinaya tirakoobyada dembiyada sannad-ka-taariikhda ah ee aagga qabsashada Dutchtown, oo daboolaya qaybo muhiim ah oo ka mid ah Dutchtown habboon iyo xaafadda Mount Pleasant. Dembiyada la xiriira qoryaha — weerarada halista ah, dhaca, iyo dilka — ayaa si aad ah hoos ugu dhacay xilli qaybaha kale ee magaalada ay weli la halgamayaan dembiyada rabshadaha wata.
Barnaamijka Rabshadaha Daaweynta ee ku yaal Dutchtown ayaa hadda kacay oo soconaya bishii Nofeembar ee sanadkii hore, natiijooyinka ilaa iyo haatan waa kuwo cajiib ah. Ma ahan oo keliya inaan aragnay hoos u dhac hoose oo ku yimid fal-dambiyeedyada rabshadaha ka dhaca xaafadda, laakiin kooxda Rabshadaha Daaweynta waxay noqdeen qayb muhiim ka ah bulshada. Haddii aad ka qeybgashay dhacdo Dutchtown ah dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaad hubtaa inaad la kulantay qaar ka mid ah maareeyayaasha barnaamijka Rabshadaha Cure iyo rabshadaha ka hortagga kuwaas oo ka baxa waddooyinka Dutchtown habeen kasta si xaafadda looga dhigo mid ammaan u ah qof walba.
Waa Maxay Rabshadaha Daawadu?
Qaadashada qaab wax looga qabanayo dembiga iyo rabshadaha sida arrimaha caafimaadka bulshada, Rabshadaha Daaweynta waxay wax ka qabataa sababaha aasaasiga ah ee dembiga halkii laga daaweyn lahaa astaamaha. Ka soo website-:
Rabshadaha waxay u dhaqmaan sida dhibaato la is qaadsiiyo. Waxaa lagu kala qaadaa soo-gaadhista, oo laga helo farsamooyinka maskaxda ee faafa iyo hababka bulshada, waxaana si wax ku ool ah loo daaweyn karaa lagana hortagi karaa iyadoo la adeegsanayo habab caafimaad.
Rabshada Cure waxay ka bilaabatay Chicago sanadkii 2000. Dr. Gary Slutkin, oo ah dhakhtar, ku takhasusay epidemiologist, iyo agaasimihii hore ee waaxda horumarinta farogelinta faragelinta ee Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa aasaasay barnaamijka. Ka dib sanado badan oo uu la shaqeynayay la dagaallanka cudurrada faafa ee tiibishada, daacuunka, iyo Aids-ka, wuxuu u dhaqaaqay sidii uu ula tacaali lahaa faafitaanka cudurka.
Magaalooyinka ku yaal Ameerika iyo adduunka oo dhan, Habka Rabshadaha Daaweynta waxay soo dejiyeen dhibco rabshado ah 40% ilaa 70%.
Sidee buu Rabshadaha Daawadaa u shaqeeyaa?
Rabshada daaweyntu waxay qaadataa sedex talaabo oo lagu joojinayo rabshadaha oo lamid ah habka loo isticmaalo in lagu xakameeyo cudurada kale ee faafa. Barnaamijku wuxuu shaqaaleeyaa carqaladeeyayaal, wacyigalin shaqaale, iyo tiro dad kale ah si loo meel mariyo qaabkooda.
Soo hel oo kala dhexgal khilaafaadka
Rabshadaha daaweeya ayaa shaqeeya joojinaya taas oo lagu yaqaan laguna kalsoon yahay bulshada. Ku-dhex-dhexaadyaashu badanaa waa dad ka socda xaafadda oo leh "Street cred." Qas-wadayaashu waxay adeegsadaan kalsoonidooda si ay u bartaan dadka bulshada ka tirsan ee ku lugta leh rabshadaha iyo falalka dambiyeed. Waxay ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa aargoosiga dhacdooyinka rabshadaha ka dib, waxay khilaafaad ku kala saaraan farsamooyinka dhexdhexaadinta, waxayna kormeeraan xaaladaha si loo hubiyo inaysan dib u soo cusbooneysiin.
Aqoonso oo Daawee Shakhsiyaadka Halista Sare leh
Shaqaalaha wacyigalinta waxay aqoonsadaan oo la xiriiraan shakhsiyaadka halista sare ugu jira inay ku lug yeeshaan rabshadaha. Shaqaaluhu waxay ka caawin karaan kuwa halista ugu jira inay helaan adeegyada bulshada sida daaweynta daroogada iyo ka caawinta shaqada. Waxay sidoo kale raadinayaan inay beddelaan dabeecadaha iyagoo ka wada hadlaya cawaaqibka rabshadaha iyo barista habab kale oo lagu xaliyo khilaafaadka.
Beddel Caadooyinka Bulshada
Kooxda Rabshadaha Cure waxay lashaqeeyaan dadka bulshada oo dhan oo ay kujiraan hogaamiyaasha, dadka deegaanka, milkiilayaasha ganacsatada, hogaamiyaasha diinta, iyo adeeg bixiyaasha si loo badalo loona xoojiyo jawaab celinta rabshadaha xaafada. Waxay ka jawaabaan dhacdo kasta oo rabshado ah si ay u muujiyaan diidmada bulshada iyo xallinta. Intaa waxaa sii dheer, waxay la shaqeeyaan ururada xaafadaha si ay u dhiiri galiyaan dhaqanka wanaagsan ee bulshada una gudbiyaan fariinta ah in bulshada aysan mar dambe u dulqaadan doonin rabshadaha.
Guddiga Aldermen ee St. Louis ayaa u qoondeeyey lacag si loo daweeyo Rabshadaha ka dhaca 2019. Oo ay weheliyaan Dutchtown, Wells-Goodfellow iyo xaafadaha Walnut Park ee Waqooyiga Side ayaa sidoo kale ka qayb gala barnaamijka.
Magaaladu waxay dooratay aan faa'iido doon ahayn Xiriirka Shaqada si loo maareeyo Rabshadaha Daaweynta ee xaafadda Dutchtown. Kooxdooda ayaa ka shaqeyn doonta Xarunta Hal-abuurka Xaafadda on Meramec. Ka shaqeynta barnaamijka ka sokow, joogitaanka Xiriirka Shaqada ee xaafadda ayaa fursad u siisay deriska shaqo la'aanta ah inay helaan shaqooyin iyo tababarro. Xiriirinta Shaqaalaynta waa lammaane joogta ah dhacdooyinka xaafadda Dutchtown oo ay ku jiraan Dutchtown Xagaaga Vibes iyo Habeenada Filimka, halkaas oo aad ka heli doontid kooxda Rabshadaha Daaweynta oo la hadlaya deriska noocyadiisa kala duwan.
Sida aan ku aragno dusha sare ee maqaalkan, natiijooyinka ayaa ahaa kuwa aad u wanaagsan illaa iyo hadda. Rabshadaha daaweyntu waxay hakad galiyeen in ka badan 80 xaaladood oo rabshado wata lixdii bilood ee ugu horreysay oo ay joogeen Dutchtown. Intaas ka sokow, kooxdu waxay aqoonsatay lana shaqaysay tiro ka mid ah deriska halista ku jira waxayna lahadashay xubno aan tiro lahayn oo bulshada ka mid ah iyo daneeyayaasha si ay uga mid noqdaan bulshada dhexdeeda waxna looga qabto sababaha keena dambiyada. Waxaan si aad ah ugu mahadnaqeynaa joogitaankooda waxaanan rajeyneynaa inaan aragno horumar badan iyo xaafad nabadgelyo leh dhammaan!
Filimka hoos Dembiyada iyo Amniga. Muuji dhamaan qeybaha. Dembiyada iyo Amniga iyo Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Waxaa laga yaabaa 30th, 2021 .
DutchtownSTL.org Dembiyada iyo Amniga Rabshadaha Daaweynta ee Dutchtown